Faka iMicrosoft Office 2007 ku-Ubuntu 12.04 kanye nokuphuma kokunye | Kusuka kuLinux
Ikakhulukazi ngenze inqubo kuLinux Mint 13 Maya kepha inqubo iyefana kuzo zonke izithako ze-Ubuntu futhi mhlawumbe neDebian. Kulesi sifundo ngicabanga ukuthi une-CD yokufaka, noma isithombe sayo .iso, esisemthethweni, nenombolo yaso yomkhiqizo nokunye.
Okokuqala ngikubeka kucace ukuthi angidingi Microsoft Office, Ngiyifakile ngoba abanye babantu engibashumayezile bangibuzile futhi ngincamela ukuthi baqhube iMO ngeWine hhayi ukuthi bangene ngemvume ngeWindows, okungahle kube kubi kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi kufanele ngithi okuphambene nalokho ebengikucabanga ukuthi iMicrosoft Office 2007 izinzile impela noma okungenani ayinginikanga inkinga yize kufanele ngithi angisisebenzisi isikhathi eside
Angiyincomi inguqulo yango-2010 ngoba ayizinzile kakhulu
1) Sibheka isithombe .iso kusuka ku-cd yokufakwa kwe-Microsoft Office 2007.
2) Sifaka I-PlayOnLinux, kusuka eSoftware Center, Synaptic noma nge-terminal nge
3) Sisebenzisa i-PlayOnLinux ukuyifuna kwimenyu »Imidlalo» I-Playonlinux. ngejubane ngincamela ukukwenza konke+f2 bese usebenzisa umyalo "I-Playonlinux"
4) Sizofaka "ukufaka", sibheka iMicrosoft Office 2007 bese siyayisebenzisa.
Khumbula ukuthi esikwenzayo kusebenzisa iskripthi esilungiselela idrayivu ebonakalayo, inguqulo yewayini, njll.
5) Silandela iskripthi, sikhethe ukufaka nge-CD bese sibheka indlela lapho sibeka khona i- .iso / abezindaba / ihhovisi
Abafana abasele, ukufaka iMicrosoft Office njengoba besizokwenza kuWindows .. Yilokho kuphela.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Faka iMicrosoft Office 2007 ku-Ubuntu 12.04 nakwezinye izinto eziphuma kuzo
Amazwana ayi-60, shiya okwakho
Ngiyabonga, ngizozama ukugwema ukusebenzisa i-virtualbox ngaso sonke isikhathi emsebenzini.
Kuyadabukisa ukuthi iLibreOffice namanje ayikutholi ukuhambisana okuphelele nokuthi ngaphezu kwabasebenzisi abangama-90% bazi i-MS Office kuphela futhi abayiniki iLibreOffice ithuba.
Angikwazi ukusebenzisa noma iyiphi i-automation yehhovisi, ngisho nasehhovisi ngisebenza kwiLinux nangezinto "zomuntu" engihlala ngisebenzisa i-Libreoffice ngaphandle kwezinkinga. Yenza konke engikudingayo, kepha uma kungumbhalo okufanele ngiwulethe kuklayenti, anginakho okunye engingakwenza ngaphandle kokusebenzisa i-MS Office ngoba ezingeni lokuhambisana kuhlala kunezinkinga, ngiyibeka icala lokuthi i-MS ayisebenzisi amafomethi wamahhala .
Phendula uJesús Ballesteros
ndoda futhi unganikeza iklayenti lakho i-pdf. ngokusobala ngaphandle kokuthi naye kufanele ayihlele ngokuphoqelela
I-LO iyahambisana nge-100% kepha ngo-2003, yingakho ngihlala ngibacela ukuthi bangithumele imibiko ku- * .doc nezinto ezinjalo.
leyo enye inketho enhle ye-XD
UBillyrubinio Alberto de la Playa kusho
Kungaba okufanayo ukusho:
"Kuyadabukisa ukuthi iHhovisi namanje alikutholi ukuhambisana okuphelele neLibreOffice" noma "Kuyadabukisa ukuthi iHhovisi alisasebenzisi i-odt ngokuzenzakalela" noma "Kuyadabukisa ukuthi iHhovisi alisebenzisi amafomethi amahhala kahle".
Ukusola i-MO ngokungathobeli i-100% LO kusemthethweni njengalabo abathi i-LO inecala ngokungathobeli i-100% MO.
Phendula uBillyrubinio Alberto de la Playa
Kuyiqiniso, kwesinye isikhathi kuyakhathaza ukubona ukuthi kuhlale kuyiphutha le-LO ukungahambelani ne-MSO, eyokugcina kube yiyo engahambisani nanoma iliphi izinga.
Wazi kahle kamhlophe ukuthi indinganiso yezepolitiki ayifani ne-de facto nezinga lebhizinisi…, akusizi ngalutho ukuthi uhulumeni noma inhlangano ithi kufanele kusetshenziswe into eyodwa, uma empeleni abasebenzisi bekhetha ukuqhubeka besebenzisa enye.
engihlala ngikusho ngemuva kokuthuthukiswa kwehhovisi le-Kingsoft yi-china, kwesinye isikhathi kuzofanele bafinyelele esivumelwaneni neMicrosoft ukuze kufezeke ukuhambisana okuphelele
UCarlos Uc kusho
IHhovisi aliqhathaniswa ne-libreoffice, noma ngubani othi asiboni ngokufaka uhlelo lwe-Windows ku-Ubuntu yingoba akalazi kahle ihhovisi noma wenza imibhalo elula nje futhi akahloli wonke amathuba anikezwa yihhovisi.
IHhovisi yilo elihamba phambili kunawo wonke amahhovisi, nginenguqulo ka-2010 efakwe ngenqubo efanayo, isebenza kahle kakhulu futhi senginayo cishe izinyanga ezinhlanu, kepha okuhlupha ukungakwazi ukuyisebenzisa, ngakho-ke nginqume ukulingisa i-win xp ngebhokisi elibonakalayo bese ufaka uhlobo lwami luka-5 futhi ngezilungiselelo ezithile lusebenza kahle, ngiyethemba ukuthi lusebenza kangcono kunewayini. Okubi ukusetshenziswa kwe-RAM.
Phendula uCarlos Uc
Uma sikhuluma ngezethulo, umxhwele uyesabeka, lokho akunakuphikisana.
Uma sikhuluma ngamaspredishithi, iCalc inezinkinga kakhulu ezingeni le-macro, ayinethezekile kakhulu kepha ihamba ngokukhulu ukushesha futhi ingasebenza nayo ezingeni eliphakeme kakhulu, kuphela ukuthi ijika liqinile kune-Exel.
Kepha lapho engingakutshela khona ukuthi akukho lapho ungabambelela khona ku-Writer, lapha akunalutho lokufisa iZwi, futhi uma ngingasho lutho akulutho. Ngenze imibiko ye-internship, izahluko ze-thesis futhi ngasebenza ngezitayela nezinto eziningi futhi angikaze ngaswela lutho ... ngicabanga ukuthi kufanele wazi ukuthi ayikho kuleyo misebenzi okukhulunywa ngayo "imisebenzi eyisisekelo".
ILibreOffice ilahlekile kakhulu. Uyi-mamatrola enkulu. Abantu abafayo abakayijwayeli okwamanje
Angikunyatekisi, lokhu engikushilo lapho kuyiqiniso.
Ucabangani ngeKingsoft Office?
Ubuke i-Chinese suite, isisesigabeni se-alpha 12 se-Gnu / Linux
Kungenye enye futhi indlela eya kwiHhovisi 2013.
akukho ukuhambisana okungu-100% futhi lapho kukhona inkinga https://blog.desdelinux.net/kingsoft-office-una-manera-para-atraer-nuevos-usuarios/
Manje okusele kimi ukunquma ukuthi yikuphi okungcono ukuthuthela abasebenzisi.
a) Faka i-LibreOffice ku-Windows / noma Faka i-Microsoft Office ku-Linux.
Kunenqubekela phambili enkulu ekufakeni i-LibreOffice ku-Windows kunokwenza okuphambene ne-GNU / Linux… ngincamela ukubuza ngaphambili… uzosebenzisa iGNU / Linux? Futhi okubaluleke kakhulu, ingabe uzosebenzisa amathuluzi omdabu noma uzofuna i-Office ne-Photoshop okokuqala? uma kukhona izimpendulo ezingezinhle, kungcono bahlale ku-Windows
Wonke umuntu angahlala njengoba efuna futhi angafaka nezinhlelo ezingama-1000 zama-spyware ku-linux, akekho onelungelo lokusho ukuthi yini engcono.
Kulungile, impela, akekho umuntu ongakhetha ukuthi uzokwenzani, leyo yinkululeko yangempela.
Uma ufuna ukusebenzisa uhlelo lokusebenza oluvela kwenye i-OS (noma ngabe yini) angiboni isithiyo sefilosofi noma sokuziphatha (njengoba abanye becabanga), kungaphezu kwalokho engingakubona njengenselelo. Uma ngifuna ukusebenzisa uhlelo lwe-X, kungani kufanele ngibophele ku-OS? Baphinde bacele ukuthi "bakubophele" kulolo hlelo. Yonke isoftware ye-Adobe iyisibonelo esicacile: bafuna ukusika uxhaso lwe-flash, ukuze bakwazi ukufudukela windows (Microsoft) noma basebenzise i-chrome (Google). I-Photoshop isebenza kumasistimu afana ne-Unix afana ne-OSX, itheku layo eliya eGNU lingasebenza kahle. Abakwenzi ukukhalela izinkampani. Ngokuthi "kungcono bahlale ku-Windows" awulwi, usiza nezinjongo zabo. Kunezinhlelo eziningi ezinamandla nezingu-100% zamahhala kumawindi, njengenguqulo esemthethweni ye-7-zip (futhi isebenza kahle newayini). Hhayi ngokushintshela kwenye i-OS kungasho ukungakwazi ukuyisebenzisa, bekungeke kube nesizathu.
I-Photoshop isebenza kumasistimu afana ne-Unix afana ne-OSX, itheku layo eliya eGNU lingasebenza kahle
Akukona ukubhebhana nxazonke, kepha lokhu kungenye yezimanga ezinkulu kakhulu laphaya. Ukuba amasistimu afana ne-Unix akubenzi ukuthi babuyele emuva bahambisane kunoma yiliphi izinga lokukhululeka futhi empeleni kuncike kakhulu kukhodi yohlelo.
Kokunye, uma othile efuna ukufaka izinhlelo ezivela kwenye i-OS ku-Linux, qhubeka! Unembeza wami awungisindi ukwenza lokho, kepha lokhu kuholela ezinkingeni zokuncika, kungcolise uhlelo (ukukhuluma ngokweqiniso) futhi kungadala izinkinga.
Ngokomqondo zizohambisana, ngoba zombili ziyi-POSIX, futhi esimweni se-OSX ithole isitifiketi se-UNIX. Lokhu akusho ukuthi okwenziwayo kusuka kupulatifomu eyodwa kuya kwelinye, kepha ngokuhlonipha amazinga athile uqinisekisa ibhuloho ezingeni lekhodi phakathi kwalezi zinhlelo. Le yindlela umuntu ahlangana ngayo neCUPS, iSamba, nezinhlelo eziningi zeBSD. Bane-Xorg yokuhambisana kwe-Unix. I-Photoshop njengohlelo lwehluzo kungenzeka isebenzise iQuartz esikhundleni se-X11, kepha kunethuba lokuthi ingxenye engeyona imidwebo iyaphendula.
I-Ps: lokhu kungikhumbuza ubuntu, bafuna ne-mir server yabo ne-Xorg ukuze kuhambisane.
Ngicabanga ukuthi okwakamuva, ngoba kokwedlule sibuyela enkingeni efanayo yokungahambisani kahle namafayela e-.docx
Okuwukuphela kwento embi ukuthi ukusatshalaliswa okwenziwe nge-gnome akunakwandiswa noma kukhuliswe usayizi kalula ngoba kubanda okwesikhashana, noma awukwazi ukusebenzisa ezinye izinhlelo zokusebenza ngolwazi engibe nalo muva nje kodwa mhlawumbe yingakho ngisebenzisa i-gnome 3.4 noma 3.6 anginasiqiniseko kodwa indlu ikhona
Futhi uma ihhovisi liphangiwe, alisebenzi vele ???
Uma uzosebenzisa isoftware eboshiwe impilo yakho yonke, usebenzisa kangcono isoftware yamahhala, ngihlala ngigxeka abantu ngalokho.
kahle leyo yinto okufanele sibhekane nayo kumafasitela noma kunjalo, awucabangi ???
Ukufunda izimpendulo ezimbili ezedlule ngiyakubuza ... Yini obenethemba lokuyithola ngokuphendula lokho? Kungcono uhambe uyokuzama, uma uzizwa uvilapha futhi ukhetha ukutshelwa, lena akuyona indawo efanele right
Ukufaka kuyinto elula. Umbuzo wegolide uwukuthi ... ngenza kanjani ama-macros asebenze ewayinini le-MSOffice sibre?
Uma uphumelela, fi, shicilela ...!
Angikwazi ngisho ukufaka iM $ Office noma enye isoftware ephathelene, ephikisana nezimiso zami zokuziphatha.
Ngifakela iLinux kuwo wonke amaklayenti ami, angikhathali uma ngabe bekhononda ngokuhamba kwesikhathi, ngimane ngibafakele futhi ngishumayele isoftware yamahhala kubo.
Eshu, kuzomele ngime lapha.
Kuhle ukuthi unezimiso zokuziphatha ezisetshenziswe kusoftware (engibona ngokwami ​​njengesithiyo lapho ngihlukunyezwa) kepha usebenzisa i-Android, futhi izinto zihamba kabi laphaya, ngoba uhlelo olugcwele isoftware ephathelene nokukhubazeka mahhala: 3 Izindinganiso eziphindwe kabili, ungazi ukuthi ukhuluma ngani? Angazi, angiyena umuntu wokwahlulela, futhi ngiqinisile.
I-Epic, i-epic elula, futhi ngiyisho ngenxa yenkani nobuphukuphuku bokubeka phansi umphimbo wakho okucabangayo futhi ukholwe abanye kangcono, ngeqanda futhi ngoba ngifuna, ngoba kubonakala kungcono kimi futhi ngoba ngalokho ngithobela Isimilo sokuziphatha sokungakugqilazi Nge-software ephathelene nokuphathwa, kufanelekile ukushaya amakhwela amathathu uma ngabe yilokho okufunayo noma okudingayo, noma uma kukusebenzela, yilokho engikushoyo kulungile.
Umqondo we-epic wokuziphatha xD
Kubantu abanjalo, abaningi babona isoftware yamahhala ingasebenzi kahle, ngizama nokukholisa abantu ukuthi baye laphaya noma okungenani bazame kodwa ngeke ukwazi ukukuhlukanisa ukuthi ifilosofi yethu iyileyo yenkululeko, ngakho-ke cha Kubonakala sengathi wena ukuthi uyithatha kwabanye (?
IPowerpoint ngeke isebenze uma ufaka iHhovisi!
Ukucushwa Kwewayini -> Imitapo yolwazi
Ekushintsheni okukhona ukubeka u-rich no-32 no-riched20
Kulungile, ngiyabonga ngokucaciselwa. Ngine-riched20 kudiski ebonakalayo engifaka kuyo ihhovisi leMicrosoft, uma ngiba nenkinga ngizokwengeza i-riched32
ukuthola ukugqugquzela ukusebenzisa i-libreoffice noma i-calibra noma enye isoftware yamahhala esikhundleni sezinhlelo zokusebenza ze-winbug uma ziku-gnu / linux akunangqondo ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza ezikhokhelwayo kodwa kuyafana nobuntu
Ngabelana ngombono wakho, kepha amaklayenti ami angibuza. njengoba ngithi ngincamela ukuthi basebenzise i-microsoft office ngaphansi kwewayini hhayi ukuthi kufanele bavule amawindi. Uma kufanele bashintshele kumawindi nje behhovisi, ekugcineni bazochitha isikhathi esiningi ngamawindi kunaku-linux futhi lokhu akungizuzisi. akubona bonke abanokuzivumelanisa nezimo okufana nokwami ​​nawe
Kepha ukhuluma ngani ngokuzivumelanisa nezimo kukaNeysonv? Lo mfana ukhuluma ngezibhamu futhi okubi kakhulu ungumuntu ozonda i-xD
Ngiqonde ukuthi akuwona wonke umuntu onamandla okuzivumelanisa nokusebenzisa amahhala kusukela ekuqaleni, futhi umsebenzi wami ukwenza izinto zibe lula kubantu engifaka kubo i-gnu / linux. ngendlela engifaka ngayo ubuntu kwabaningi, futhi njengamanje ngibhala kusuka ku-linux mint, ngakho-ke into yokuzonda ubuntu ikude neqiniso hahaha 😛
Kusuka ku-linux, kungani ususa ukuphawula kwami?
Ingabe ayikho inkululeko yemibono lapha?
Lokhu kubukeka njengobushiqela
Futhi kwashiwo nini lapha ukuthi lena yintando yeningi? Uma kubonakala kimi noma kwelinye ilungu labasebenzi ukuthi ukuphawula kwakho akungezi lutho, ukuthi kuyacasula noma ukuthi empeleni kuwudoti… Ingabe kufanele sikudlulisele kuphela ilungelo lakho lokuziveza ngokukhululeka? ...
Ngicabanga ukuthi uhambile impela, comrade, empeleni lokhu kungumbuso wobushiqela ... unomusa, kepha ubushiqela ekugcineni.
uphawula kusuka ku-safari futhi usebenzisa i-ipod ngakho-ke angicabangi ukuthi ukuphawula kwakho bekuyi-pro-linux kakhulu ngakho-ke kuthanda ukucasula ama-linuxers ale bhulogi
Futhi i-GNU / Linux izoba ngcono nini? Angazi, kepha inqobo nje uma sisaqhubeka nokuguqula abantu, sigxeke wonke umuntu onentshisekelo kwi-Mac-OS noma iWindows futhi abone iLinux njengenkolo, ngicabanga ukuthi sizoba kude nokunqoba ukushiyeka kwethu.
I-athikili enhle kakhulu. Kulula, kuqondile futhi kucacile. Ngifake i-Office 2007 ku-GNU / Linux kumishini eyahlukahlukene, nge-Playonlinux nangaphandle kwayo. Futhi iyafaka. Izinhlelo zokusebenza "ezisebenzayo" ziyigama futhi ziyavelela kepha zinokulinganiselwa okuningi. Bengisebenzisa kakhulu lezi zinhlelo zokusebenza kuhlanganiswe nokufinyelela futhi ukusebenza kubi kakhulu kwi-GNU / Linux. Wonke umuntu ofaka lokho akufunayo, kepha lapho le suite isebenza kahle kakhulu iku-Windows.
Futhi umbono wami uqobo ukuthi alikho i-office suite elingcono noma elibi kunelinye, kuya ngendawo oyinikeza yona nokwazi ukuyisebenzisa. Ngincamela iLibreOffice kune-AOO, ukuze kube lula ngoba lapho ngiqala nge-SL ngangithanda i-Go-oo futhi ngangibalandela lapho behlangana ne-TDF ngokubonakala kwe-Oracle.
Ngaphandle kokuthandwa yilowo nalowo, kuyadingeka futhi ukuhlola izidingo zalowo nalowo. Ngiyayithanda i-Linux, ngisebenzisa i-LO, kepha uma u-99,9% wabantu engisebenza khona basebenzisa i-MS Office, ngeshwa nami kufanele ngiyisebenzise. Akunandaba ukuthi ngekaMicrosoft noma cha, kubonakala kimi ukuthi njengamanje alikho ihhovisi lehhovisi elifinyelela ezithendeni ze-msoffice. Impela, kungumbono wami. Ngokufanayo, ngiyaqhubeka nokuxhasa isoftware yamahhala ngoba kungenxa yezinhlelo zokusebenza ezinjengalezi lapho abantu bengathutheli ku-linux, baye kunoma iyiphi i-distro.
Ukuya odabeni lwendatshana, ngikwazile nokufaka le suite yehhovisi ngisebenzisa uhlelo olubizwa nge-CROSSOVER ebengingenankinga nalo. Kodwa-ke ngePlayonlinux angikwazi ukukwenza.
UGustavo J kusho
Lowo mqondo yiwona ogcina i-MS Office isetshenziswe kakhulu.
Akufanele unake ukuthi i-99.99% isebenzisa i-MS Office. Uma ufuna izinto zishintshe kufanele uhlanganyele futhi wenze ingxenye yakho, ngokwesibonelo, uvangela ozakwenu ukuthi basebenzise amafomethi wamahhala, kholisa umphathi, badube iMicrosoft nefomethi yayo, njll.
Kepha uma uhlala nje ulinde i-ODT ukuthi ibambe, lolo suku alusoze lwafika.
Kufanele uvukele ngezikhathi ezithile.
Phendula uGustavo J
Uqinisile, kepha kufanele ngixazulule impilo yamakhasimende ami, angikwazi ukuyokhuluma nomphathi wazo ngamunye ngoba kusho ukutshalwa kwesikhathi nesikhathi sama-euro angama-0. le yindlela yami esheshayo
ngeshwa bonke abafundi engifunda nabo bangithumela umsebenzi wabo owenziwe ehhovisi, noma ngabe ngiyathanda noma cha angifanele ngiwufakele ukubuka kahle
Ngine-office 2007 efakiwe futhi isebenze kahle kakhulu, uma kukhona owaziyo noma iyiphi indlela yokuvula amafayela we-.docx ngqo nehhovisi ngingajabula 🙂
Bheka, ngidale enye indatshana, ngicabanga ukuthi izoyixazulula ngempela impilo yakho ngoba konke okudingayo ukubona ngeso lengqondo umsebenzi https://blog.desdelinux.net/skydrive-la-solucion-a-nuestros-problemas-de-compatibilidad-con-microsoft-office/
I-free ofice iyafana futhi ingcono, ngaphandle kokukuvumela ukuthi ugcine amadokhumenti ngefomethi ehambisana nehhovisi likaMicrosoft futhi into enhle kakhulu imahhala, iqiniso ukuthi i-linux ayinayo imakethe yokudlala ngoba kwezinye izindlela zesoftware ilingana noma ingcono kunalezo ezaziwa kakhulu ezizimele
mmm angazi kodwa ngicabanga ukuthi unephutha lapho, ngicabanga ukuthi iMicrosoft Office njengamanje iyisicelo sehhovisi esizisebenzelayo esithuthuke kakhulu.
Imvamisa ngisebenzisa i-libreoffice ne-Microsoft suite lapho ngifuna ukuhambisana okuvela eceleni.
Yabaphathi: lapho ngenza kusebenze inketho engezansi «Ngazise ngamazwana amasha nge-imeyili. Ungabhalisa futhi ngaphandle kokuphawula. " lezi azifinyeleli kimi, ngabe kukhona iphutha kulokhu? ngaphambi kokuba ngibe nezinkinga.
Ngingomunye walabo abangafuni ukusebenzisa noma yiziphi izici ezithuthukile zehhovisi ezishintshayo. I-Abiword yanele ukuthi ngivule noma ngenze imibhalo ye-.odt kanye ne-libeoffice ukuvula imibhalo yamagama. Uma kukhona noma yimuphi umbuzo ngifuna ukubona idokhumenti yamagama engabukeki kahle ku-libreoffice noma ngifuna ukudala idokhumende yegama, ngikwenza ngehhovisi eliku-inthanethi iMicrosoft elinalo mahhala. Engizele ukubhekisa kukho ukuthi kumsebenzisi ojwayelekile, angicabangi ukuthi badinga ihhovisi. Ngicabanga ukuthi kwesinye isikhathi siphikelela ekubeni nezinhlelo ezinezici eziningi zethu ezingazidingi ngempela, lapho kunezinye izindlela zokukwazi ukwenza into efanayo ngaphandle kokuhlupheka okungaka (futhi kwaziwe ukuthi ngisho ikhompyutha ejwayelekile umsebenzisi, hhayi lowo osebenza kakhulu nge-automation yasehhovisi).
Kuyiqiniso ... ngisebenzisa ukubanjwa kombhalo kakhulu, futhi iqiniso ukuthi nge-Abiword, unokuningi ...
Kimi kuyadabukisa ukuthi kule nqubo i-MS-Access ayikwazi ukufakwa, ngoba ehhovisi sinesistimu yokubonisana ene-graphical interface eyenzelwe i-Access. Yisona sizathu kuphela esingasivumeli ukuthi sithuthele iqembu lezinsizakalo zamakhasimende siye eLinux futhi kufanele sibhekane nama-virus virus ngaso sonke isikhathi.
Uma sisebenzisa uhlelo lokusebenza lwamahhala, ukufaka ihhovisi le-microft siyaziphikisa, asikho isidingo salokho, empeleni i-libreofffice ingcono kunehhovisi le-microsft
okungcono ngayiphi indlela ???
Ake sithethelele ukuphawula kwakho ...
uma ungitshela ukuthi iLibreoffice ingcono ngoba imahhala, asilungile.
I-Linux imahhala kangangokuba ikuvumela ukuthi usebenzise isoftware ephathelene.
Umsebenzisi ukhululekile ukunquma.
Uma ngisebenzisa i-linux "Ngiyaziphoqa" ukuthi ngisebenzise KUPHELA okukhona ku-linux yize ngingakuthandi, bengingeke ngizizwe "ngikhululekile"
Inketho enhle yabafikayo abathembele kwi-MS Office, ngiyisebenzisa kuphela emsebenzini, ngoba iphathwa kanjalo lapho, ngithanda u-2007 kakhulu walesi suite, futhi yiyona engiyithande kakhulu. I-OpenOffice neLibreOffice zihlanganisa izidingo zami ngo-100% futhi angiboni ukuthi kungani kufanele ngisebenzise inketho yeMicrosoft, noma enye indlela ekhokhelwayo. Ngifunde izikhathi ezingenakubalwa mayelana "nokuphakama" kwale suite kunezinketho zamahhala, okungenza ngihleke, ngoba abantu abaningi basebenzise kuphela i-MS Office impilo yabo yonke, futhi basebenzisa ezinye zezinketho zamahhala zemizuzu. Kumele kukhunjulwe ukuthi iMicrosoft yazuza indawo enayo ngokususelwa ekuhlukunyezweni kwayo kanye nasekuziphatheni kwayo, hhayi ngokuba "okuhamba phambili", kepha ngokuZIMISELA njengekuphela kwayo.
Ngiyajabula ukuthi namuhla, ngingathumela iMicrosoft esihogweni, okungenani ngokuzisebenzisela mina uqobo, futhi ngimema wonke umuntu ukuthi asebenzise kahle izinketho zamahhala, isikhashana bese eshiya umbono, ehlaziya, ehlola futhi uma ehlaziya…. bese banquma ngokukhululekile ukuthi bafuna ukusebenzisa ini, kungaba yi-MS Office, Libreoffice, noma iLaputadeoros Office, njll.
Ngayifaka ukuze ngibone ukuthi ihamba kanjani futhi isebenza kahle kakhulu, kepha ngiyikhiphile ngoba i-GNU / Linux yami izwe "ingcolile" ... ngincamela ukuyisebenzisa ku-vbox noma ngabe isebenzisa i-RAM ethe xaxa ... kepha kuyindlela enhle kakhulu yokuheha abantu abaningi emhlabeni we-GNU / Linux ngenkathi bazi i-libreoffice noma okunye okuphuma kukho 😛
Nge-libreoffice ngisebenza kahle kakhulu kepha lokho kuhle kubaguquli abasha abafaka iglue
Ihhovisi leLibre alinaso isikhungo sokwenza izinkomba, kuyadingeka ukufaka i-plug-in ukuyenza isebenziseke.